पुरुषमा यौन चाहनामा कसरी बृद्धि गर्ने - यौन जिज्ञासा र समाधान - साप्ताहिक
म अहिले ३१ वर्षको भएँ । मेरो विवाह २२ वर्षको हुँदा भएको हो । पहिले ममा प्रशस्त नै यौनचाहना थियो, आजभोलि निकै कम छ । मेरी श्रीमती धेरै चाहना गर्छिन् तर मलाई एकदमै कम चाहना हुन्छ त्यसैले धेरै चिन्ता लाग्छ । जब म सम्भोग गर्न थाल्छु, २/३ पटकमै स्खलन भैहाल्छ । म अहिले वैदेशिक रोजगारमा छु । हस्तमैथुन गर्दा पनि चाँडै स्खलन हुन्छ । म के गरूँ ? पहिले स्प्रे प्रयोग गरेको थिएँ । कतै त्यसको साइड इफेक्ट त होइन अनि नेपालमा यौन रोगको उपचार कहाँ गर्दा राम्रो होला ?
यौनसम्पर्कको माध्यमवाट सर्ने रोगलाई यौन रोग वा संक्रमण भनिन्छ र नेपालका प्रायः सबैजसो अस्पतालमा त्यसको उपचार हुन्छ । यौनरोगको शंका छ भने चर्म तथा यौनरोग विशेषज्ञसँग सल्लाह लिनु बेस होला ।